स्टेसनरी र फर्निचर पसल धाएर १५० 'फेस शिल्ड' बनाए, सोलुखुम्बु पठाए :: Setopati
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत २२
डा. मिङ्मा ग्याल्जेन शेर्पाले फेस शिल्ड बनाउन प्रयोग गरेका सामग्री।
कोरोना भाइरसको महामारीले बजारमा फेस मास्क अभाव भइरहेका बेला स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पाले स्थानीय स्तरमै उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरेर 'फेस शिल्ड' बनाएका छन्।
स्टेसनरी पसलमा पाइने ‘क्लियर सिट’ र ‘स्टेप्लर’, फर्निचरमा पाइने ‘फित्ता’ र ‘इलास्टिक ब्यान्ड’ प्रयोग गरेर उनले यी फेस शिल्ड बनाएका हुन्। आफैंले घरमा बनाएका १५० फेस शिल्ड शनिबार सोलुखुम्बुको जिल्ला अस्पताल पठाएको उनले बताए।
‘सोलुखुम्बुमा केही मात्रामा फेस शिल्ड पठाइदिनुपर्यो भन्ने खबर आयो,’ पूर्व महानिर्देशक शेर्पाले शनिबार सेतोपाटीसँग भने, ‘केही ठाउँ चहारेँ तर कतै पाइएन। त्यसपछि यसको बनाउने तरिका बुझेँ अनि आफैं बनाएर पठाउँछु भनेर सुरू गरेँ।’
डा. मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पा
यसको निम्ति सामानहरू खोज्न उनी गत शनिबारदेखि स्टेसनरी र फर्निचर पसल चहारेका थिए। उनले किताब बाइन्डिङमा प्रयोग गरिने पारदर्शी प्लास्टिकको पाता स्टेसनरी पसलबाट किने। त्यसको एक छेउमा फर्निचर पसलमा पाइने फित्ता लगाएर इलास्टिकले अडाए। त्यसपछि स्टेप्लर गरेर शिल्ड तयार पारे।
'फेस शिल्डलाई बलियो र गुणस्तरीय बनाउन धेरै समय लाग्यो,' उनले भने, 'सामान उपलब्ध भयो भने बनाउने प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ, एक जनाले दिनको सय वटासम्म बनाउन सक्छ।'
फेस शिल्ड तयार पार्दा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सानो गल्ती भए शिल्ड खुकुलो हुन सक्छ। खुकुलो शिल्ड संक्रमणबाट बच्न प्रभावकारी हुँदैन।
उनले सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालमा पठाएका शिल्ड त्यहाँबाट जिल्लाका आठ नगरमा वितरण हुनेछन्। माग र आवश्यकताअनुसार वितरण गरिने उनले बताए।
प्लास्टिक प्रयोग गरिएको यस प्रकारको फेस शिल्ड वातावरणमैत्री भने छैन। ‘हामीले समयअनुसार हेर्नुपर्यो। अहिलेको समय कसरी सुरक्षित हुने भनेर ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। यी शिल्डहरू जथाभाबी नफाल्न र राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सल्लाह भने दिएको छु,’ उनले भने।
उनले एउटा फेस शिल्ड एक दिन मात्र प्रयोग गर्न पनि सुझाएका छन्। उनका अनुसार कस्तो संक्रमणबाट बच्न प्रयोग गरिएको हो भन्ने ख्याल राख्दै कति दिनसम्म प्रयोग गर्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ। संक्रमण जति डरलाग्दो भयो, पुन: प्रयोग गर्दा उति ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘एकचोटि प्रयोग गरिसकेको फेस शिल्ड फेरि प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई जीवाणुरहित बनाउनुपर्छ। राम्ररी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ, नभए रोग फैलिने डर हुन्छ,’ उनले भने।
पूर्व महानिर्देशक शेर्पाका अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण बेला यस प्रकारको शिल्ड वा मास्कको निकै खाँचो पर्छ। अहिले अभावको समय यस्ता सजिलै उपलब्ध हुन सामग्रीबाट पनि फेस शिल्ड बनाउन सकिन्छ भनेर आफू लागेको उनले बताए।
शेर्पा अब १०३० वटा फेस शिल्ड बनाउने तयारीमा छन्। ‘बनाइसकेपछि जुन अस्पताल वा क्षेत्रमा खाँचो छ, त्यहीँ वितरण गर्ने सोच छ,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २२, २०७६, ०८:१५:००